Dowladda Mareykanka oo maanta si rasmi u aqoonsaneysa dowladda Soomaaliya – idalenews.com
Dowladda Mareykanka oo maanta si rasmi u aqoonsaneysa dowladda Soomaaliya
Dowladda Mareykanka ayaa maanta si rasmi u aqoonsaneysa dowladda Soomaaliya, markii sanadkii la soo dhaafay ay ka baxday xilliga KMG, iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh uu booqasho maalmo qaadaneysa ku joogo Mareykanka.
Kaaliyaha Xoghayaha arrimaha dibada Mareykanka Johny Carrson ayaa sheegay in Hillary Clinton maanta oo khamiis ah la kulmi doonto Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Mr Carrson ayaa sheegay in labada mas’uul ay is weydaarsan doonaan waraaqo diblomaasi ah, kaasoo noqon doona mid Mareykanka uu ku aqoonsado Soomaaliya.
Sidoo kale arrimaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadli doonaan Xoghayaha arrimaha dibada Mareykanka iyo Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxaa ka mid ah in dib loo soo celiyo xiriirkii labada dal ka dhaxeeyay labaatan sano ka hor iyo in dib Mareykanka safaaradihiisa uga furto Soomaaliya.
Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa xiriirkooda diblomaasi uu go’ay labaatan sano ka hor markii ay bur burtay dowladdii Dhexe ee Soomaaliya, iyadoo xilligaas wixii ka dambeeyay uu Mareykanka Soomaaliya u arkay dal fashilmay.
Booqashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa loo arkaa mid muhiim ah, iyadoo wax badan ka bedeli doonta sidii Mareykanka markii hore uu kula tacaamuli jiray Soomaaliya.
Dagaal xalay ka dhacay magaalada Kismaayo, markii Al-Shabaab labo jiho ka weerartay